Tee ime ihiere - Otu esi eme ya dabere na ihu gị Bezzia
Susana godoy | 15/09/2021 12:00 | Mma
Ị ma ka esi etinye ihere? Ọ dị ka ihe dị nfe na ọ bụghị na anyị ga -akpaghasị onwe anyị nke ukwuu, mana mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na anyị esoghị usoro kwesịrị ekwesị, nsonaazụ nwere ike ọ gaghị abụ. Yabụ, oge eruola ka anyị mara ka anyị kwesịrị isi eme ya dabere n'ụdị ihu anyị nwere.
Ebe ọ bụ na ihe anyị chọrọ bụ mgbe niile mee ka isi ihe na akụkụ anyị kacha mma pụta ìhè, yabụ maka nke a anyị chọrọ ndụmọdụ kacha mma. Eleghi anya ị chere na ihere adịghị enwe sayensị nke ukwuu mgbe etinyere ya n'ọrụ, mana dịka ị ga -ahụ na ọ nwekwara obere aghụghọ ya. Yabụ, ka ha niile buru gị pụọ, ị ga -ahụkwa nnukwu nsonaazụ ndị ị tụrụ anya ya.
1 Otu esi etinye ihere na ihu ihu
2 Otu esi etinye ihu na ihu ihu oval
3 Tee ihere na ihu gbara gburugburu
4 Maka ihu dị ogologo
5 Triangular ihu
Otu esi etinye ihere na ihu ihu
Anyị na -amalite na ihu ihu, nke bụ nke nwere agba agba mara mma na nke nwere ihu. N'otu aka ahụ, ọkpọ gị ga -adị oke mma na nke a pụtara na anyị ga -eso usoro usoro iji nwee ike itinye blush. Ebe ọ bụ na anyị chọrọ ya, ọ bụ inye ihu a kpọrọ nke siri ike ka ọ kacha mma. Yabụ, anyị na -aga ịchọ ọkpọ na anyị ga -egosipụta akụkụ ya elu. Ọ ga -anọ ebe ahụ anyị na -etinye blush mana mgbe niile na -aga n'akụkụ mpụta. Mee mmegharị okirikiri ole na ole na mpaghara ka ị gwakọta nke ọma na ị ga -achọpụta ka esi ewepụta mmetụ ntorobịa karịa n'ime sekọnd.
Otu esi etinye ihu na ihu ihu oval
Ọ bụkwa ihu ọzọ na -ahụkarị nke ọma na nke a, ekwesịrị ịsị na ha nwere akụkụ nke cheekbones sara mbara karịa mpaghara agba na ọbụna n'egedege ihu. Yabụ, nke a na -eme ka o doo anya na ọ na -aga n'ihu ịkwalite cheekbones, yabụ ihe pụrụ iche a na -eme ka anyị na -eche ka esi etinye blush. Eziokwu bụ na ọ bụkwa nzọụkwụ dị mfe na nke ahụ bụ, Anyị ga -ebuwanye ibu na mpaghara ahụ, anyị ga -etinye ya na ntì niile, kama naanị n'akụkụ akụkụ ihu. Mana ee, gbachapụrụ agbachapụ yana nwee agba dị ka peach nke na -abụkarị otu n'ime ọkacha mmasị. Gbalịa mee ka agba na -aga site na etiti gaa na mpaghara dị nso.
Tee ihere na ihu gbara gburugburu
Mgbe anyị na -ekwu maka ihu gbara okirikiri, anyị na -ekwu maka ndị nwere anya nke ukwuu ma n'ịdị elu na obosara, yabụ a na -atụfu akụkụ akụkụ ya mana ee, cheekbones na -adịkarị obosara. Yabụ otu esi etinye blush iji nyere anyị aka ịkọwa ịma mma anyị, dị mfe. N'okwu a ọ kacha mma tinye ya n'okpuru ọkpụkpụ ọkpọ gị ma zere akụkụ nke ntì. Ọ ka mma ka ị na -eme ya n'ụzọ na -arịgo elu dị ka a ga -asị na agba ga -erute n'ụlọ nsọ. Maka na ọ bụ ụzọ ịgbatị mpaghara a.
Maka ihu dị ogologo
Ụdị ihu a na -eme ka agba ahụ nwekwuo ogologo na wara wara, nke na -aghọ nke a ma ama. Mana ọ bụ eziokwu na n'ịdị ịkpa ike, cheekbones na -apụkwa iche. N'ihi na, Ọ dị mma ịme ụdị ahịrị kwụ ọtọ nke na -esi na mpaghara imi ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ ruo na ntị. N'ihi na ọ bụ ụzọ iji mebie onyonyo ogologo nke ihu a nwere ma belata ya, ọbụlagodi na ọ bụ naanị na ọkwa nke ngwa anya.
Ọ na -abụkarị ihu dị gịrịgịrị nke n'egedege ihu ya dị warara mana agba ya sara mbara. Yabụ, ka ị gaa mezie mpaghara ndị a ntakịrị anyị ga -etinye blush ahụ n'ụzọ ziri ezi. N'okwu a, anyị ga -eme ụdị ahịrị dị n'akụkụ elu nke cheekbone. Ihe mekwara ihu ihu ihu. Ị ga -agbasorịrị usoro eke nke cheekbone kwuru. Ugbu a ị nweghị ihe ngọpụ iji mee ka ihu gị pụta ìhè!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Mma » Otu esi etinye ihe ịchafụ dị ka ihu gị si dị
Nnukwu uru maka ụmụaka nwere nkịta